Himasoako manokana ny hanomezana asa anareo tanora eto Ambohitromby.
Hotolorako zanak'akoho ianareo izay tia miompy ka ho ampy sakafo ny mponina ary ny tanora hanana antom-pivelomana.
Amboarintsika ny tohodrano ao Andavakambohimanga sy Manazary.
Hotrandrahantsika ireo vato marobe ananareo ka hataontsika rarivato ireo lalana eto.
Tiako hanana asa mendrika ianareo koa hiara hiasa izaho sy ianao.